Jarmalka oo dadkiisa u kala dooray midka Ammaan badan labada boge ee Internet-ka ee Chrome iyo Firefox
Mogadishu - 23:04:44
Saturday October 19, 2019 - 22:38:06 in Wararka by Super Admin
Xafiiska Federal-ka Jarmalka ee dhanka Amniga Macluumaadka ayaa baaritaan dheer ku sameeyay bogagga Internet-ka laga daalacdo ee Google Chrome, Firefox, Microsoft Internet Explorer iyo Microsoft Edge, waxaana u soo baxday in bogga lagu kalsoonan karo dhanka amaanka macluumaadka uu yahay Firefox.
Baaristan laguma soo darin bogagga kale ee la isticmaalo kolka wax laga daalacanayo dhanka Internet-ka ee kala ah; Safari, Brave, Opera iyo Vivaldi.
Xafiiska Federal-ka Jarmalka ee ammaanka iyo macluumaadka Tiknoolojiga (BSI) ayaa soo bandhigay in Firefox uu noqday midka keliya ee soo buuxiyay shuruudaha casriga ah ee Browser-ada lagu kalsoonaan karo, iyagoo warbixintan ay BSI ay daabacday bishii hore ee September 2019.
BSI waxay ugu baaqday hay’adaha dowladda iyo shirkadahaba gaarka loo leeyahayba inay isticmaalaan Mozilla Firefox.
Laanta Amniga Internet-ka ee Jarmalka ayaa sanadkii 2017-kii markii ugu horreysay farta ku fiiqday bogga Inernet-ka laga daalacdo ee la aamini karo xagga xagga ammaanka, hase yeeshee markan waxay ku sameeyeen dib u eegis.